ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာစီးပွား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးရဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာစီးပွား
Posted by student on Jun 6, 2012 in Copy/Paste |9comments
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ရှိမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးဣဒ္ဓိလှ၏ ကိုယ်ကျိုးရှာလုပ်စားနေမှုများ အား ဖော်ထုတ်အရေးယူပေးပါရန်
ဆက်သွယ်ရေး စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန၏ လက်ရှိ မန်းနေဂျင်းဒါရိုက်တာရာထူးနေရာယူထားသော ဦးဣဒ္ဓိလှသည် ယခုလက်ရှိ MPT မှ ရောင်းချ လျှက်ရှိသော GSM Mobile Phone သန်း (၃၀) စီမံကိန်းမှ ၂ သိန်းတန် ဖုန်းကဒ်များကို နောက်ကွယ်တွင် သူနှင့် အကျိုး တူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော တပည့်များမှတဆင့် ကုမ္ပဏီများမှ တရားဝင်မရောင်းချခင်ကပင် မြို့အသီးသီးရှိဖုန်းဆိုင်များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကြိုတင်ရောင်းချခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် GSM Phone Card များသည် အမှန်တကယ် ရောင်ချခွင့်ရက်မတိုင်ခင်ကပင် ဆိုင်အသီးသီး၌ ကြိုတင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ကြပြီး ဆိုင်များမှလည်း ဖုန်းကဒ်များအား မည်သည့်နေ့တွင် လိုင်းပွင့်မည် စသည်ဖြင့် လိမ်လည်ပြော ဆိုကာ ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိရောင်းချခွင့်ရရှိထားသည့်ကုမ္ပဏီများသည်လည်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရရှိရေးအတွက် နောက်ကွယ်တွင် လာဘ်ငွေများပေးကမ်း၍ ခွင့်ပြုမိန့်များကို ရယူခဲ့ကြပါသည်။ထို့အပြင် ဖုန်းနံပါတ်အလှ လေးလုံးတွဲ ငါးလုံးတွဲများကိုလည်း ငွေကျပ် သိန်း ပေါင်းများစွာယူ၍ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများတွင် သူ၏လက်မှတ်ဖြင့် တပည့်များမှတဆင့် ထုတ်ယူရောင်းချလျှက်ရှိပါသည်။
ဦးဣဒ္ဓိလမှာ ယခင်နအဖ စစ်အစိုးရ စစ်တပ်၏ဗိုလ်မှူးရာထူးမှ အရပ်ဖက်ဆက်သွယ်ရေးသို့ ပြောင်းရွှေ့လာသူဖြစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေး နှင့်ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ငန်းတွေ့အကြုံနှင့် နည်းပညာပိုင်းတို့တွင်လည်း ကျွမ်းကျင်မှုမရှိပါ။ သို့သော်လည်း သူ၏ဖခင် ဒေါက်တာ ဦးသာလှ နှင့်နီးစပ်ရာ လူကြီးအသိုင်းအ၀ိုင်း အကူအညီ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအားကိုးဖြင့် ယခုလက်ရှိရာထူးနေရာအထိ ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ် ရေးဌာန အတွင်းပိုင်းတွင် လည်း နေရာကောင်းရယူလိုသူများကိုလည်း လာဘ်ငွေများရယူပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါ သည်။ ထို့အပြင် မန္တလေးတိုင်းမန်နေဂျာဘ၀တွင်လည်းကောင်း၊ GM ဘ၀ တွင်လည်းကောင်း၊ အော်တိုကြိုးဖုန်းနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများကို အခ ကြေးငွေယူ၍လည်း ကိုယ်ကျိူးရှာလုပ်စားခဲ့ပါသည်။
၎င်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသည့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်း Phone Board ထိုင်လျှင်လည်း ငွေပေးနိုင်သောသူများကိုသာ ဖုန်းများကိုချ ပေးခဲ့ပါသည်။ ဖုန်းဈေးများကောင်းနေစဉ်အတွင်း ကြိုးဖုန်းတစ်လုံးကို ကျပ်သိန်း ၂၀ မှ ၃၀ အထိယူခဲ့ပါသည်။ ဖုန်းများဈေးတက်လျှင် ငွေ ပိုတောင်း၍ ဖုန်းဈေးများကျလျှင် ငွေပြန်မအမ်းပါ။ မိုးဘိုင်းဖုန်းများကို ကျပ် ၅ သိန်းမှ ၁၀ သိန်းအထိ အပိုကြေးကောက်ခံ၍ ကိုယ်ကျိုးရှာ ခဲ့ပါသည်။
မန္တလေးတိုင်း ဆက်သွယ်ရေးရုံး ငွေစာရင်းဌာနမှ လက်ရှိမန်နေဂျာ အမျိုးသမီးနှင့်ပူးပေါင်း၍ Phone Board များတွင် အေးဂျင့်အဖြစ် ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ဖုန်းဘီလ်သွင်းသောငွေများ၊MobilePhone အပျောက်အပျက်များ၏ ဌာနသွင်းငွေများကို ဘဏ်သို့မသွင်းသေးပဲ ထို ငွေများဖြင့် မြေအရောင်းအ၀ယ်လုပ်ခြင်း ပွဲရုံများလုပ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ကိုယ်ကျိုးရှာသုံးစွဲခဲ့ပါသည်။ ထိုငွေများကို ရန်ကုန်မြို့တွင် လုံးချင်း တိုက်များ၊ ကားများ ၀ယ်ယူခဲ့ပါသည်။ ဌာနမှလူကြီးများ မန္တလေးမြို့သို့လာလျှင် ဧည့်ခံစရိတ်ကို နှစ်ဆသုံးဆတင်ပြ ၍ ကိုယ်ကျိုးရှာခဲ့ပါသည်။
အဆိုးဆုံးမှာ မန္တလေးမြို့ ၆၆ လမ်း ၂၂x၂၃ လမ်းကြား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းအိမ်ရာမှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦး၏နေအိမ်တွင် ဆေးခြောက်များနှင့် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားများ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရာတွင်လည်း ယခုလက်ရှိ် MD (ယခင် မန္တလေးတိုင်းမန်နေဂျာ) သည် ထိုဝန်ထမ်းကို အရေးယူမခံ ရအောင်ကာကွယ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုဝန်ထမ်းမှာ သူ၏တူတော်စပ်ပြီး ယခုလက်ရှိတွင် မန္တလေး GSM Radio ဌာနတွင် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ယနေ့ Clean Government Good Government ဖြစ်လာစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့သော ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးဣဒ္ဓိလ၏နောက်ကွယ်တွင် ကိုယ်ကျိုးရှာလုပ်စားဆောင်ရွက်နေမှုများအား ထုတ်ဖော် အရေးယူပေးစေ လိုပါကြောင်း တင်ပြတိုင်ကြားအပ်ပါသည်။
တိတိကျကျ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လောက်နဲ့ ဘယ်နှစ်လုံး ဘယ်နေ့မှာ ရောင်းတယ် ဆိုတာမျိုးမှသာ အရာရောက်မည်ထင်ပါသည် ။ ယခုလောက်နှင့်တော့ ပစ်စာဟုသာသဘောထားပါလိမ့်မည် ထင်ပါသည်။
ကော်မီတီ၊ အသင်းအဖွဲ့ တိုင်းလည်းမကင်းပါဘူး။
ကိုယ်ကျိုးရှာလို့ရတဲ့နေရာရဖို့သူတို့ မှာ ရင်းနှီး ပေးကမ်းရတဲ့ငွေကလည်း မနည်းဘူးလေ။
“Clean Government Good Government” လို့လေသံတွေ ပစ်ပြီး ဖြစ်မလာတော့
အစိုးရအဖွဲ့ လည်းသိက္ခာကျ၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးလည်း အရှက်ရပါတယ်။
ဝန်ကြီးဌာနတိုင်း၊ ကော်မီတီ၊ အသင်းအဖွဲ့ တိုင်း က အကြီးအကဲ လူကြီးတွေ တစ်ဦးချင်းက
“ Clean ” ဖြစ်ပါတယ်လို့ ၊ ပြောနိုင်မှ အစိုးရအဖွဲ့ “ Clean ” ဖြစ်မှာပါ။
အဲဒီလိုပြောနိုင်တဲ့ “ Clean ” ဝန်ကြီးဌာန၊ ကော်မီတီ၊ အသင်းအဖွဲ့ တွေ ရှိပြီလား။
အဲဒီလိုပြောနိုင်တဲ့ “ Clean ” အကြီးအကဲ လူကြီးတွေ ရှိပြီလား။
အဲဒီလူ လုပ်စားနေတယ်ဆိုတာ လူကြီးတွေ မသိဘဲနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
အခုလို သူ့လုပ်ရပ်တွေကို ပြောပေးမှ သူ့ကို ဘယ်လို အရေးယူပြမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါ။
ရှေ့က နှစ်ယောက်တော့ အရင်ပြုတ်သွားပြီ။
ပြုတ်ယုံလေး ပြုတ်တာတော့ ကျေးဇူးတင်တယ်။ အေးဆေးသွားစားနား လိုက်ဦးမယ်ပြောမှာပေါ့။
ခေါင်းစဉ်မှာ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးရဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာစီးပွား ဆိုလို့
ဗိုလ်ချုပ် သိန်းထွန်း ကိုများ ပြောသလားတွေးမိတာ..
He own the big/ splendid house at Mindama Road. Opposite of M CC hall.
Now it is sure that he is very very rich man. It is nature of our developing country’s monopoly bribery.
ကိုယ်ကျိုးရှာလို့ မရအောင် SIM ကဒ်အလကားပေးပြိး
ဖုန်းပြောခ မပေးရတော့မှပဲ ဖုန်းကိုင်တော့မယ်……….။
ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်း မဲခိုးပီးဒေါ့ သမ်မဒလုပ်နေရဒါဆိုဒေါ့